कृष्ण ओलीलाई भेट्दा बिराज भट्ट रोए ! ११ लाख सहयोग बुझाउँदै भने- तिमी रियल हिरो हौ(भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > समाचार > कृष्ण ओलीलाई भेट्दा बिराज भट्ट रोए ! ११ लाख सहयोग बुझाउँदै भने- तिमी रियल हिरो हौ(भिडियो सहित)
कृष्ण ओलीलाई भेट्दा बिराज भट्ट रोए ! ११ लाख सहयोग बुझाउँदै भने- तिमी रियल हिरो हौ(भिडियो सहित)
admin January 24, 2019 समाचार 0
काठमाडौं (शिशिर भण्डारी) सबै अन्तर्वार्तामा कृष्ण भाईले मेरो मनपर्ने हिरो बिराज भट्ट हुन् र भेट्न मन छ भनिरहँदा मलाइ बिराज दाईलाई कृष्णसँग भेटाउन मन लाग्यो । बिराज दाईले पनि मेरो प्रस्तावलाई सहर्ष स्विकार्दै आफ्नो फ्यान कृष्ण वलिका लागि समय दिनुभयो । बिराज दाईका लाखौं फ्यानहरु मध्येका बाल गायक जनक गन्धर्व र ठेलामा मःमः बेच्ने गायक भनेर चिनिएका कपिल पौडेल पनि हामी सँगै गएका थिए । यहि सु-अवसरमा देश तथा बिदेशबाट कृष्णलाई माया गर्नुहुने सबैले पठाउनु भएको सहयोग रकम ११ लाख ५ हजार ३ सय २१ रुपैंया पनि बिराज दाईकै हातबाट रुपालाई हस्तान्तरण गराएँ । सहयोग पठाउने सबैको नाम मैले आफ्नो फेसबुक लाईभमा लिएको छु ।
कृष्ण ओली सहयोग अभियानमा सहयोग गर्ने सबैलाई मेरो २ हात जोडेर नमस्कार, बिराज दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद । यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरौं है । कृष्ण ओलीका लागि आवश्यक उपचार खर्च पुग्नै लागिसकेको छ । चाँडै नै सहयोग अभियान बन्द गर्दैछौं ।
हामी चाँडै नै कृष्ण जस्तै हात र खुट्टा गुमाएका खोटांगका हिराकाजी ढुंगानाको घर जाँदैछौं । उहाँलाई सहयोग गर्नका लागि ९८११००६९२९ मा सम्पर्क गर्नुहोला । बाँकेका बुद्धिमान कुँवर उपचारका लागि काठमाडौं आउँदैछन् भन्ने जानकारी पाईयो, केहि दिनमै उनको भिडियो पनि आउनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओली र भियतनामी प्रधानमन्त्री सुअन फुकबीच भेटवार्ता
राम बहादुर बमजनको आश्रम मुनि लुकेको बाल प्रतिभा, जसले दुनियाँलाई रुवायो…(हेर्नुहोस् भिडियो)
यस्तो पनि भएछ ! लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचनमा मतपेटिकामा पिसिआरको रिपोर्ट खसालेर गएछन्
झापाकै यी इमान्दार अटो रिक्सा चालक, यात्रुले छाडेकाे ५ लाख यसरी फिर्ता गरे… सम्मान स्वरूप शेयर गराैं